Akhriso:-Jabuuti oo Go’aan Cad Ka Qaadatay khilaafka Wadamada Gacanka Carbeed – Balcad.com Teyteyleey
Akhriso:-Jabuuti oo Go’aan Cad Ka Qaadatay khilaafka Wadamada Gacanka Carbeed
Dowladda Jabuubti warsaxaafadeed ay soo saartay ayaa waxa ay mowqif ka qaadatay qilaafka dhaxeeyo wadamada Gacanka Carabta, iyadoo sheegtay in ay xiriirka u jarayso wadanka Qatar oo ay la safaneyso Xulufada Sacuudiga hogaaminaayo.
sidaan ayuuna u qornaa warsaxaafadeeda ay kasoo saartay qilaafkaasi iyo cida ay la safanayso.
Dowladda Djabuuti waxay si heer caalami ah u shaacineysaa in ay go”aansatay in ay yareeneyso xiriirka siyasadeed eek ala dhaxeeyo wadanka Qatar.
Go” aankaan waxaa gaaray Dowladda Jabuuti iyadoo doonaysa in ay la midoobdo wadamada ku xulufooway in ay xiriirka u jaraan dowladda Qatar kadib markii la ogaaday in ay garab siiso argagixisada, iyo mintidiinta jihaadiistayaasha ah ee kasoo horjeeda wadamada ku midoobay Gacanka carbeed iyo jaamacada Carabta.
Dowladda Jauuti weli waxaa ka go”an in ay xiriir siyaasadeed oo wanaagsan uu dhexmaro wadama carabta ah, waxaana isku deyi doonaa in wax waliba aan ku xalino wada hadal loo adeegsanaayo codka carbeed oo wada jira.
The post Akhriso:-Jabuuti oo Go’aan Cad Ka Qaadatay khilaafka Wadamada Gacanka Carbeed appeared first on Ilwareed Online.